Talooyin iyo tabaha ku saabsan Adobe jilitaankii, Bilowday ka plugins
Ma rabtaa in aad noqon pro ah oo la isticmaalayo Adobe jilitaankii in xaalkaa videos? Fiiri kuwa Talooyin iyo tabaha ma waxaad ogaataan oo aynu bilaabi ka Adobe jilitaankii plugins.
1 Adobe jilitaankii dhoofinta iyo
1.1 Adobe jilitaankii Talooyin
1.2 Adobe jilitaankii Import dhoofinta
1.3 Edit 4K Video ku Adobe jilitaankii
1.4 MTS in Adobe jilitaankii
1.5 MP4 in Adobe jilitaankii
1.6 MOV in Adobe jilitaankii
1.7 FLV in Adobe jilitaankii
1.8 AVCHD in Adobe jilitaankii
1.9 Ciyaar si YouTube
1.10 jilitaankii in DVD
2 Adobe jilitaankii plugin
2.1 Adobe jilitaankii plugins
2.2 Adobe jilitaankii horyaal arrimo
2.3 Adobe jilitaankii tuuryo
3 Adobe jilitaankii Alternative
3.1 Adobe jilitaankii Linux Alternative
3.2 Adobe jilitaankii Qaybaha Kale
3.4 Saameyn Raadka Vs Adobe jilitaankii
4 Adobe jilitaankii Details
4.1 Shuruudaha Adobe jilitaankii System
4.2 Adobe jilitaankii u Mac
Waa maxay 4K TV?
Iyadoo horumarinta ee dhawaan ka dhacay technology iyo rabitaanka ah marna dhamaaneynin daahirsan waayo-aragnimo guriga filimada, Waxaannu u soo joognay horumarinta degdeg ah oo duurka ku ah bandhigay xalka. Sanadihii la soo dhaafay, waxaannu maqalnay badan oo ku saabsan 4K ah. Waa maxay waxa xaqiiq 4K iyo ujeeddada? Waad maqasheen laga yaabaa in dukaan ku sheegaysa ku saabsan sifooyinka TV oo gaar ah, oo meel xusay saabsan UHDTV. 4K asal ahaan waa technology ah xal pixel siman taas oo uu noqday xal caadiga ah ee wax soo saarka movie iyo sawirka dhamaadka sare. Sida magaca khusaysaa, 4K ka kooban 4,000 oo pixels per image caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee; Technology 4K uu buuxiyo shuruudaha xal oo kala duwan marka ay timaado bandhigay telefishanka. Iyadoo file caadiga ah cayriin 4K lahaa xal of 4096 X 2160 pixels in loo isticmaalo warshadaha, UHDTV ah (Television Qeexid Ultra High), wuxuu isticmaalaa 3840 X 2160 pixels. Duuban 4K ayaa laga soo xigtay sida xal caadiga ah ee shineemooyinka iyo cajalado warshadaha. Si kastaba ha ahaatee, Television caadiga taagan ayaa la daawado pixel yar. Marka la soo koobo, 4K xal siin lahaa daawashada fiican oo ballaaran jir ah, natiijada ka badan tegayo television 720p a badan. Sawirka hoose wuxuu muujinayaa aragtida xaglaha farqiga u dhexeeya saddex qaraarada sawirada.
Inkastoo, 4K technology image ayaa in isticmaalka ganacsi tan iyo war abuurashadoodii ee kamaradaha tayo sare leh ee 2003, waxa aan ahaa ilaa 2009-kii, in technology waxaa taas lagu daro telefishanka iyo ujeedooyin madadaalada guriga. Maanta waxaa jira noocyo kala duwan ee TV-ga ee suuqa kuwaas oo bixiya 4K telefishanka socon in dadweynaha guud. Adeegyada UHDTV waa magaca ganacsi oo la siin 4K telefishanka socon. Si kastaba ha ahaatee, wax soo saarka kuwani waa SLT oo aan ku gaari ee iibsada la miisaaniyadda dhagan. Si kastaba ha ahaatee; wax muhiim ah in la ogaado halkan waa in files 4K aan la saxar kara ama isku bedeshay tan iyo guryaha ay siman; Sidaa darteed, faylasha sida yeelan doonaan in ay la saxar hab toosan.
Sida loo Edit 4K ee Adobe jilitaankii?
Waa wax iska caadi ah in aad aakhirka la 4K file ah oo ku saabsan waxaad disk, taas oo u muuqata in aad computer si ay u tijaabiso. Ma aha oo kaliya waxaad ka heli doontaa qalad markii uu isku dayay in faylka la furo, computer ayaa sidoo kale u dhigi doonaa in ay awoodda ugu yar iyo daaha doonaa badan tahay laalaadaan. Xitaa kombiyuutarada degdeg ah la RAM dhamaadka sare iyo processor degdeg ah u muuqataa ilaa siiyo marka ay timaado 4K files. Dhibaatada waxa ay tahay iyadoo software tafatirka image iyo ma ahan oo keliya ah Details computer gaabis ah. Tani waa meesha Adobe jilitaankii yimaado si ay kaaga caawiyaan in aad xaalkaa files 4K si fudud.
RED waa mid ka mid ah kaamirooyin ugu caansan dhammaadka sare 4K duubo warshadaha. Tani waa nooca camera oo waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro sci-fi filimada Hollywood oo dhan cajalado kale heerka sare. Muqaalka video diiwaan by kamaradaha RED waa 4K by default. Sidaa darteed, waxaad u baahan doontaa inaad xaalkaa files ka hor inta aanad u isticmaali kartaa noocyo kala duwan oo PC iyo / ama telefishanka. Raac tallaabooyinka hoose si aad u aragto sida aad edit karaa 4K footage ee Adobe jilitaankii.
Tallaabada 1. Update plugin soo dejiya
Fur Adobe jilitaankii Pro iyo raadiyo update ah u plugin ka soo dejiya RED. Waxaad ka raadsan kartaa plugin soo dejiya internet-ka ah. Adobe ayaa version cusub ee soo dejiya ee kaalinta website-keeda. Waa lacag la'aan ah si ay u soo bixi goobtii. File ma aha weyn, oo waa inay qaataan oo kaliya dhowr ilbiriqsi ay shardi tahay in aad isticmaasho xiriir ah broadband degdeg ah. Adobe jilitaankii CS6 soo diyaar la files updated, si kastaba ha ahaatee; waxaad u baahan doontaa inaad gacanta kala soo bixi files kuwaas oo loogu talogalay version 5.5 Ciyaar ama ka hooseeya. Marka file la soo bixi, aad siibka karaa galka iyo soo dajiyo labada files gacanta. Folder wuxuu noqon doonaa ku jiraan waraaqo ay dhacdo in aad u baahan tahay in la akhriyo tilmaamaha.
Tallaabada 2. dhis mashruuc cusub
Marka sameeyo, bilowdo Pro jilitaankii oo guji "Ka bilow Project New a". Marka aad doorato in aad taas samayn, daaqad kor u muuqdaan doonaa fursado badan oo ku saabsan dhinaca bidix ee shaashadda. Laga soo bilaabo kuwaas oo aad ka dooran doonaa RED R3D (Fiiro gaar ah: Waxaa muhiim ah in la ogaado nooca saxda ah ee file ah oo aad leedahay, waana inaad u samaysaa sida xulashada). Kuwani fursadaha xushay soo diyaar la CS6 iyo uma baahnid inaad si loo soo dajiyo gacanta iyaga.
Tallaabada 3. Dooro goobaha
Sida aad dooro ikhtiyaarka RED R3D, subcategory ah ka muuqan doona hoos ku badhanka oo ku siinayaa fursado dheeraad ah. Halkan, dooran 1080P in la soo muuqday doonaa dusheeda (Fiiro gaar ah: Waxaad dooran kartaa wax soo saarka ah oo ka duwan haddii aad leedahay heerar gaar ah). Sababta ugu weyn ee loo marayo xulashada saarka 1080P ah waxaa sabab u ah geeddi-socodka degdeg ah. Marka tafatirka la sameeyo, waxaad dib ugu version 4K ka bedeli kartaa mar tafatirka waxaa loo sameeyaa. Haddii kale, waxa ay noqon doontaa xanuun qoorta in xaalkaa file 4K ah, gaar ahaan haddii aadan lahayn PC ka saraysa.
Tallaabada 4. Import 4K videos
Next, hel oo dajiyaan faylka footage 4K ka drive. Waxaad arki doontaa in faylka la cabiray 100 boqolkiiba. Sidaas darteed, footage la Asakrtii doonaa si heer sare ah, oo u baahan in la lahaa in hoos loo cabiraa si habboon suuqa kala 1080p tafatirka. Si kastaba ha ahaatee; file weli ku jiraa qaab 4K iyo ma noqon doono mid waxtar leh in ay si toos ah u qaaddo. Sidaas darteed, u tag 'Edit "Tab, iyo dooran' aad rabtid"> General, iyo calaamadee sanduuqa akhriska "miisaanka Default in jire size". Delete clip ah oo mar kale dib ugu soo celiyo. Waxaad arki doontaa sida ay ugu aadayso screen tafatir ku dhammaataan. 47% saamiga u qaadidda waa shaqeyn wanaagsan this. Waxaad ku samayn kartaa adigoo u dhaqaaqin bar cas dhinaca bidix.
Tallaabada 5. Edit 4K videos
Faylka Cas, waxaad sii edit karaa, kuwaas oo ay xaq u riixaya suuqa kala mashruuca iyo dooran "goobaha ilaha". Waxaa muuqaalka ka furi doonaa oo ay la socdaan fursadaha kala duwan oo dhalaalaya, gooladaha, goob gamma iyo wax badan oo dheeraad ah. Tani waxay si toos ah u cusbooneysiin doonaa footage ee suuqa kala tafatirka aad. Marka aad samaysay tafatirka la doonayo, waxaad badbaadin kartaa mashruuca oo dheeraad ah u aragto in ka dib markii ay soo raaca.
Tani waxa ay ahayd a 4K tafatirka guud ee files RED, si kastaba ha ahaatee, waxaad dooran kartaa goobaha ay sida aad file il.
Tani waa tutorial aasaasi ah oo ku saabsan Adobe jilitaankii, xirfad software video tafatirka. Si kastaba ha ahaatee, haddii video tafatirka waa cusub oo aad si, tixgelin Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) , taas oo ah aalad awood laakiin si sahlan loo isticmaalo dadka isticmaala kaliya bilaabaya. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
Sida loo soo dejinta iyo dhoofinta Videos ee Adobe jilitaankii
> Resource > Video > Sida loo Edit 4K Duuban in Adobe jilitaankii